Ankehitriny, Ampangain’i Maosko i Okraina Hoe Mandefa Mpampihorohoro Ao Krimea. Nolazaina Izany Ireo Mpampiasa Aterineto Rosiana. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Aogositra 2016 1:49 GMT
Vladimir Putin tamin'ny famoriana mpanao gazety tany Maosko ny 10 Aogositra 2016. Sary: Sampana Mpanao gazetin'i Kremlin
Niverina indray ny savorovoro ara-miaramila any Krimea, izay anaovan'ireo tomponandraiki-panjakana federaly Rosiana fiampangana henjana ny governemanta Okrainiana, nilazàna fa niditra an-tsokosoko ny sisintany ireo olon'ny fitsikilovana avy any Okrainiana mba hikarakara andiana fanafihana fampihorohoroana any amin'ny tany bodoin'ny Rosiana. Mbola manjavozavo ireo andinindininy amin'izay tena zava-nitranga marina, fa nilaza ireo tomponandraiki-panjakana Rosiana fa farafahakeliny nisy fitsofohana an-tselika roa nampiasàna fitaovam-piaiana: ny iray ny alin'ny Alahady 7 Aogositra, ary ny iray hafa ny alina nanaraka iny.
Taorian'ireo fiampangan'ny Sampam-Piarovana Federalin'i Rosia, nifanakalo fifampiampangàna i Maosko sy Kiev hoe miezaka ny hanadaladala ny sain'ireo vahoakany amin'ireo olana ara-toekarena anatiny ny iray. Niampanga an'i Okraina ho “misafidy ny horohoro” mihoatra noho ny filaminana ny Filoha Rosana Vladimir Putin, raha milaza kosa ny Filoha Okrainiana Petro Poroshenko fa manely “tsaho fanadalàna saina” natao ho fialantsiny amin'ny setrasetra bebe kokoa ataon'ny Rosiana i Kremlin.
Mahavarina, niandry teo amin'ny telo andro teo ireo Rosiana tomponandraikitra vao nampahafantatra ny daholobe momba io tantara io. Nisy tatitra tsy voamarina anefa tany aloha, nahitàna ireo teboka rehetra tamin'ny taratasy fifandraisana navoakan'ny Minisiteran'ny Atitany Rosiana any Krimea. Niporitsaka tao amin'ny Aterineto ilay taratasy tao anatin'ny iray andro monja, ary nivezivezy tao amin'ny media sosialy farafaharatsiny ny 8 Aogositra. (Na dia loko samy hafa aza no nitaterana ny lokon'ny volon'ilay voarohirohy any anatin'ireo endrika samihafan'ilay lahatsoratra.) Raha tsy voamarina ny maha-tena izy ilay APB, mitovy be tamin'ny notaterin'ireo tomponandraikitra ofisialy Rosiana androany ny votoatiny.
Taratasy niporitsaka, toa hoe avy tamin'ny Ministeran'ny Atitany Rosiana any Krimea.
Noho ny fanaovana heloka bevava tao amin'ny faritr'i Armyansk, olona dimy no karohana, izay misy mandeha fiara sy an-tongotra ankehitriny. Samy manao fanamiana fitondra miady daholo izy ireo, mitondra tombokavatsa amin'ny tanany maneho ny sainam-pirenena Rosiana hita ao ambanin'ilay diamondra [“insigne”].
Filazàna ny mombamomba ny roa amin'ireo lehilahy:
Refy: 180-195 sentimetatra [5 feet, 11 inches ka hatramin'ny 6 feet, 4 inches], vatana atletika, mavo volo, eo amin'ny 30-35 taona eo no fahitàna azy;
Mazava volo, taona: 30-35.
Mitam-piadiana ary mampidi-doza ireo olona ireo. Raiso ny fepetra hiarovanao ny tenanao raha mifanena amin'izy ireo.
Raha hitanao ireo, ataovy izay tsy hihetsehan'izy ireo ary manaova tatitra any amin'ny foibe fanarahamaso anatin'ny Ministeran'ny Atitany Krimeana.
Ny 9 Aogositra, nizara itsy taratasy hita etsy ambony itsy, mamintina ny fahazoany ny zava-nitranga tany amin'ny sisintany Krimeana ny 7 Aogositra, ilay mpitoraka bilaogy mpomba ny ao Kremlin, Boris Rozhin, fantatra kokoa amin'ny hoe “Kolonely Cassad” (izay nolazalazain'i RuNet Echo ny volana Jolay 2014).
Avy tamin'ny loharano azo itokisana ity, izay namoaka loharanombaovao tena marina mihoatra noho ny indray mandeha mikasika ny Donbas. Mizara andinindininy sasantsasany izy mikasika ny toe-draharaha any Perekop [lemaka iray midadasika mampifandray ny saikinosy Krimeana amin'ny taniben'i Okraina].
1. Naharay loharanombaovao mikasika ny toeram-panafenana fitaovam-piadiana any amin'ny faritr'i Armyansk ny Sampana Fiarovana Federaly Rosiana any Krimea. Nisy andianà mpanadihady manokana naparitaka any amin'ilay toerana.
2. Rehefa tonga teo amin'ilay toerana voalaza ireo mpanadihady, nahita vondron-dehilahy 20 nirongo baomba. Avy hatrany dia notifirin'ireo andian-dehilahy ireo ilay iraka mpanadihady.
3. Nipoaka ny ady, nahatonga ny fahafatesan'ny manampahefana FSB iray (izay omaly ny fandevenana azy). Taorian'izay, nantsoina ny tohana ara-miaramila. Nandritra ny fifandonana, nampiseho fahaizana miady nahavariana ny fahavalo.
4. Tamin'ny ady nanaraka izany, niparitaka ilay vondrona tsy fantatra: lehilahy niisa 14 na 15 nitsoaka tany anaty rano (nitondra niharan-doza sy naratra tsy fantatra ny isany, niala teo izy ireo) niverina tany amin'ny faritr'i Okraina, niampy fiara mifono vy nitidra tao anaty rano (avy any Syvash) ary nanomboka nitifitra ho an'ilay vondrona.
5. Niaraka tamin'izany, taty ankilanay, nisy iry hafa namoy aina ary iray naratra. Mbola tafajanona any Krimea ny efatra mpikambana tao amin'ilay vondrona [mpiditra an-tsokosoko], ary mikasika ireo lehilahy ireo ilay fampitandremana navoaka sy miely amin'ny Aterineto (araka ny fahazoako ny sehatry ny “Drafitra Manda Fiarovana”).
6. Nahazo baomba 500 kilao [1.100 livres] (izay tsy TNT fotsiny) ilayu andiana mpanadihady manokana. Ankehitriny, misy fitadiavana ireo olona 4-5, satria zavatra iray ny fitazonana azy ireo ho velona, fa zavatra hafa ihany koa raha tafavoaka an'i Krimea na tafiditra an-tsokosoko izy ireo.
Araka ny fahazoako azy, ny fahamarinana ofisialin'ity tantara manontolo ity dia miankina amin'ny hoe ho tratra sa tsia ireo olona ireo. Mampahatsiahy fihantsiana hita matetika amin'ny sisintany ilay toe-draharaha.
Araka ny fandàvan'ny governemanta Okrainiana ny anjara andraikiny amin'ny fifandonana tany amin'ny sisintanin'i Krimea, mbola mahatonga resabe ilay taratasy tafaporitsaka avy amin'ny Minisiteran'ny Atitany, sy ny famintinan'i Kolonely Cassad ny zava-nitranga ny 7 Aogositra. Na inona na inona ny marina, toa hita ho mitovy amin'ireo tatitra nipoitra voalohany tao amin'ny Aterineto Rosiana ilay fitantaràna mipoitra any Rosia ankehitriny.
Raha mila fanazavàna mismisy kokoa momba ireo fitantanràna mifaninana amin'ity tranga ity, jereo ny tnataran'ny Aric Toler’ ao amin'ny Atlantic Council's Digital Forensic Lab.